Facebook mail ​များ ​မေးလ်​ထဲ​ဝင်​လာ​တာ ​မ​လို​အပ်​ရင် ​ဘယ်​လို​လုပ်​သင့်​သ​လဲ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Facebook mail ​များ ​မေးလ်​ထဲ​ဝင်​လာ​တာ ​မ​လို​အပ်​ရင် ​ဘယ်​လို​လုပ်​သင့်​သ​လဲ
Notimeforlove: ​ဆ​ရာ​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​မ​င်္ဂ​လာ​ပါ​ရှင် ​တ​ခု​လောက်​မေး​ချင်​လို့ Facebook mail ​တွေ ​ကိုယ့် ​အီး​မေးလ်​ထဲ ​မ​ဝင်​အောင် ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ ​မ​သိ​လို့​ပါ​ဆ​ရာ.
​ဆ​ရာ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး​ညီ​မ​ရေ. ​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ပဲ​ခေါ်​ပါ. ​အ​စ​က​တည်း​က ​ကျွန်​တော့်​ကို ​ကြည့်​မ​ရ​တဲ့​သူ​တွေ​က ​ဆ​ရာ​ခေါ်​မှ ​တော်​ကြာ​နေ ​က​လော်​တုတ်​နေ​ဦး​မယ်. ​အောက်​မှာ ​ရေး​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်​ညီ​မ​ရေ. ​ကျွန်​တော်​လဲ ​မေးလ်​ထဲ​ကို ​မ​ကြာ​မ​ကြာ​ဆို​သ​လို facebook mail ​တွေ​ဝင်​ဝင်​လာ​တာ​ကို ​ကြုံ​ဖူး​ပါ​တယ်. ​ဒီ​နေ့​တော့ ​မေး​ထား​တာ​နဲ့ ​တစ်​ခါ​တည်း ​ပုံ​ကို​ပါ ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်. ​အဲ့​ဒါ​မှ ​ပို​ရှင်း​သွား​မှာ​ပါ. ​ဟို​တစ်​ရက်​က ​ညီ​ငယ်​တစ်​ယောက် virus ​ဝင်​နေ​လို့​တဲ့ ​အဲ့​ဒါ ​ဝင်​နေ​တဲ့ virus ​က ​ဘာ​တွေ​ကို ​တိုက်​ခိုက်​တာ​လဲ ​ဒါ​မှ​မ​ဟုတ်​ရင် ​အဲ့ virus ​ဝင်​လာ​ရင် error ​ဘာ​တွေ​တက်​လဲ ​တက်​တဲ့ error ​လေး​ကို ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြီး​တော့ screen short ​ရိုက်​ပြီး​ပို့​ပေး​ပါ​လို့. ​ပို့စ်​တင်​တဲ့​အ​ခါ​မှာ error ​ပုံ​လေး​ပါ ​ထည့်​ပေး​ချင်​လို့​ပါ​လို့ ​ပြော​တာ​ကို. ​မ​ပြော​ချင်​လဲ​နေ​ဗျာ​တဲ့ ​ဆိုင်​က​လူ​ပဲ​လုပ်​ခိုင်း​တော့​မယ် ​ဆို​ပြီး ​တန်း​လစ်​သွား​တာ​ပဲ. ​ကျွန်​တော့်​မှာ​က ​တစ်​ခါ​တစ်​လေ ​ပို့စ်​တင်​ရင် ​ပုံ​လေး​တွေ ​ထည့်​ထည့်​ပေး​တာ​က ​တစ်​ခြား​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး ​စာ​ချည်း​ပဲ ​သက်​သက်​ဆို​ရင် ​သိပ်​ပြီး​တော့ ​ရှင်း​မှာ​မ​ဟုတ်​သ​လို ​နား​လည်​မှာ​လဲ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး. ​အဲ့​ဒါ​ကြောင့် ​ဖြစ်​လာ​တဲ့ error ​ပုံ​လေး​တွေ​ကို ​တင်​ပြီး​တစ်​ခါ​တည်း ​ရှင်း​ပြ​လိုက်​တော့ ​နောက်​ကို​လဲ ​ဒီ​လို error ​ပေါ်​လာ​တော့ ​ဘယ်​လို​ရှင်း​ရ​မ​လဲ ​တန်း​သိ​သွား​တာ​ပေါ့. ​အဲ့​ဒါ​ကြောင့်​မို့ ​ပုံ​လေး​ကို ​မေးလ်​ပို့​ပေး​ပါ ​အ​ကူ​အ​ညီ​တောင်း​မိ​တာ​နဲ့ ​အ​ဟောက်​ခံ​ရ​သေး​တယ်. ​ကဲ​အောက်​မှာ ​လတ်​တ​လော ​ကျွန်​တော့် facebook account ​က​ရှိ​တဲ့​ပုံ​လေး​တွေ​နဲ့ ​တစ်​ခါ​တည်း ​ရှင်း​ပြ​လိုက်​ပါ​တယ်.
​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး ​မိ​မိ facebook account ​ကို​ဝင်​လိုက်​ပါ။ ​ပြီး​တော့ ​ပုံ​ထဲ​က​အ​တိုင်း ​ဝင်​ပြီး​တာ​နဲ့ Group ​ဆို​တာ​ကို ​ပုံ​ထဲ​က​အ​တိုင်း ​တွေ့​အောင်​ရှာ​ပါ. ​ပြီး​တာ​နဲ့ ​အောက်​က​ပုံ​ထဲ​က​အ​တိုင်း Leave Group ​ကို ​နှိပ်​ပေး​လိုက်​ပါ. ​ပုံ​ကို​သိပ်​မ​မြင်​ရ​ရင် ​က​လစ်​နှိပ်​လိုက်​ပါ ​ပုံ​ကြီး​ထွက်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်.
​ပြီး​တာ​နဲ့ ​အောက်​က​ပုံ​အ​တိုင်း ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် .
​အဲ့​ပုံ​မှာ​လဲ Leave Group ​ကို ​ထပ်​ပြီး​တော့ ​နှိပ်​ပေး​လိုက်​ပါ.
​အား​လုံး​ပြီး​သွား​ရင်​တော့ Account Settings ​ကို​သွား​ပါ။ ​ပြီး​တာ​နဲ့ ​ဘယ်​ဖက်​အ​ခြမ်း​က Notifications ​ဆို​တဲ့ ​စာ​သား​ကို ​နှိပ်​ပေး​လိုက်​ပါ။ Recent Notifications ​ဆို​တဲ့ ​အောက်​မှာ ​အောက်​က​ပြ​ထား ​တဲ့​အ​တိုင်း ​စာ​အိတ်​ပုံ​စံ​လေး​တွေ ​မြင်​တွေ့​ရ​ပါ​လိမ့်​မယ်. ​ကို​မ​လို​တဲ့ ​အ​ကောင့်​နဲ့​သက်​ဆိုင်​တဲ့ ​စာ​အိတ်​အား​လုံး​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ ​မှိန်​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ်. ​ဘာ​စာ​မှ​ကို ​မ​ရောက်​ချင်​တာ​ဆို​ရင်​တော့ ​ရှိ​သ​မျှ​စာ​အိတ် ​အား​လုံး​ကို ​မှိန်​သွား​အောင် ​တစ်​နည်း​အား​ဖြင့် Disable ​ဖြစ်​သွား​အောင် ​လို့ ​နှိပ်​ပေး​လိုက်​ပါ. ​ဒါ​ဆို​ရင် ​မေးလ်​ထဲ​ကို ​ဘယ် facebook mail ​မှ ​ဝင်​လာ​တော့​မှာ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး.
​ကဲ​အား​လုံး​ပဲ ​မ​လို​အပ်​ပဲ ​ရောက်​လာ​တဲ့ ​မေးလ်​များ​ကို ​ဖျက်​ရ​ခြင်း​ဒု​က္ခ​မှ ​ကင်း​ဝေး​သွား​လိမ့်​မယ်​လို့ ​ထင်​ပါ​တယ်. ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​စေ​ဗျာ.
​အိ​လေး​ငွေ November 9, 2011 at 10:03 PM
Moez phyu November 30, 2011 at 9:24 AM
Tin December 2, 2011 at 1:19 PM
​အစ်​ကို​ပြော​တဲ့ Group ​အောက်​မှာ Leave Group ​ကို​မ​တွေ့​ဘူး Create Group ​ပဲ​ရှိ​လို့ ​လုပ်​လို့​မ​ရ​ဘူး ​အစ်​ကို ....
zaw January 24, 2012 at 5:03 PM
min ko July 17, 2012 at 8:14 PM
myo lay November 17, 2012 at 4:19 PM
​ကျေး​ဇူး​ပါ brother ​ရေ--။​အစ်​ကို​ကျွန်​တော့်​ကို​ကူ​ညီ​လက်​စ​နဲ့​ကူ​ညီ​ပေး​ပါ​အုန်း ​ညီ mobile phone ​က​ဒေါင်း​လော့​ဆွဲ​လို့​ရ​တဲ့​ဖိုင်​ကို ​ကွန်​ပြူ​တာ​က​နေ ​ဖုန်း​ထဲ​ကို​ထည့်​ပါ​တယ် ။ ​ထည့်​ပြီး​တော့ INSTALL ​လုပ်​မ​ရ​လို့ ​ခေါင်း​လည်း​ခြောက်​နေ​ပြီ။ ​ကူ​ညီ​ပါ​အုန်း ။​မွေး​နေ့​ကျ​ရင် ​အုန်း​နို့​ခေါက်​ဆွဲ​တိုက်​ပါ့​မယ်​နော် ​အစ်​ကို ။
mail ​ပို့​တဲ့​အ​ခါ ​မေးလ်​ထဲ​က ​စာ​သား​နဲ့​အ​တူ ​...
Locked ​ကျ​ပြီး​တော့ Run box ​ခေါ်​မ​ရ​ခြင်း ​ပြ​ဿ​...
Facebook mail ​များ ​မေးလ်​ထဲ​ဝင်​လာ​တာ ​မ​လို​အပ်...